Psalmen 145 HTB - Nnwom 145 ASCB
Ayɛyie dwom. Dawid deɛ.
1Mɛma wo so, me Onyankopɔn, me Ɔhene;
2Ɛda biara, mɛkamfo wo;
3Awurade so, na ɔsɛ nkamfo kɛseɛ;
obiara rentumi nsusu ne kɛseyɛ.
4Awoɔ ntoatoasoɔ baako bɛkamfo wo nnwuma akyerɛ ɔfoforɔ;
wɔbɛka wo nnwuma akɛseɛ ho asɛm.
5Wɔbɛka wʼanimuonyam ne wo tumi a ɛhran no ho asɛm,
na mɛdwene wʼanwanwadwuma ho.
na mapae mu aka wo nneyɛɛ akɛseɛ no akyerɛ.
7Wɔbɛhyɛ wo papayɛ mmorosoɔ no ho fa,
na wɔde anigyeɛ ato wo tenenee ho dwom.
8Awurade yɛ ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ;
ne bo kyɛre fu na nʼadɔeɛ dɔɔso.
9Awurade yɛ ma obiara;
na ɔwɔ ahummɔborɔ ma nʼabɔdeɛ nyinaa.
10Ao Awurade, wʼabɔdeɛ nyinaa bɛkamfo wo;
na wʼahotefoɔ bɛma wo so.
11Wɔbɛka wʼahennie no animuonyam ho asɛm
12sɛ ɛbɛyɛ a nnipa bɛhunu wo nnwuma akɛseɛ
ne wʼahennie animuonyam a ɛhran no.
13Wʼahennie yɛ daa ahennie,
na wo tumidie wɔ hɔ ma awoɔ ntoantoasoɔ nyinaa.
14Awurade wowa wɔn a wɔhwe ase
na ɔpagya wɔn a wɔn nnesoa ama wɔakom.
15Ani nyinaa hwɛ wo ɛkwan,
na woma wɔn wɔn aduane wɔ ne berɛ mu.
16Wobue wo nsam
na woma biribiara a ɛwɔ nkwa no nʼapɛdeɛ.
17Awurade tene wɔ nʼakwan nyinaa mu;
na ɔyɛ adɔeɛ ma deɛ wayɛ nyinaa.
wɔn a wɔfrɛ no nokorɛ mu nyinaa.
19Ɔyɛ wɔn a wɔsuro no no apɛdeɛ ma wɔn;
ɔtie wɔn sufrɛ na ɔgye wɔn.
20Awurade hwɛ wɔn a wɔdɔ no nyinaa so,
nanso amumuyɛfoɔ deɛ, ɔbɛsɛe wɔn nyinaa.
Ma abɔdeɛ nyinaa nkamfo ne din kronkron no
ASCB : Nnwom 145